E-News Nepali || Fast and Accuracy » नेपाली बा आमाकी नेपाली छोरी भारतीय टिमबाट तेक्वान्दो खेल्न नेपाल आएकी नेपालीसंगै हार्नुपर्दा बुवालाई अंगालो हालेर धरधरी रोइन् (भिडियो)
नेपाली बा आमाकी नेपाली छोरी भारतीय टिमबाट तेक्वान्दो खेल्न नेपाल आएकी नेपालीसंगै हार्नुपर्दा बुवालाई अंगालो हालेर धरधरी रोइन् (भिडियो)
भारतीय टिमका खेलाडीले मीठो लवजमा नेपाली बोलिरहेको देखेर खेलअघि नै तेक्वान्दो हलमा शिल्पातिर धेरैको ध्यान गइरहेको थियो । उनका दाइले पनि दर्शकदिर्घामा नेपालीमा नै कुरा गरिरहेका थिए । त्यसबेला मानिसहरूको अनुमान थियो,‘आसामतिरकी नेपाली भाषी होलिन् ।’ तर, स्याङ्जादेखि शिल्पाको समर्थनमा आएका गणेशलाई भेटेपछि थाहा लाग्यो, नेपाली बाआमाकी ‘भारतीय छोरी’ को जन गण मन भित्रको कथा ।
कुरा आइनै हाल्यो शिल्पाका बुबा गंगा ११ वर्षको उमेरमा भागेर भारत पुगेको । सानोमा गाउँकै कुनै मान्छेसँग रेलमा गएको केही कुरा उनलाई याद छ । त्यसपछि दिल्ली कसरी पुगियो र के के गरियो भन्ने सम्झनाका स्पष्ट कथा त असाध्यै लामो छ । बुझ्न सकिने कुरा के भने ३ सय रुपैयाँ खल्तीमा बोकेर दिल्ली पुगेको ११ वर्षको केटाले के के मात्रै दुःख पायो होला, अनुमान नै पनि लगाउन सकिन्छ ।
उनी सुनाउँछन्- ‘गएकै भोलिपल्टबाट नै चिया दोकानमा महिनाको ८० रुपैयाँमा नोकरी गरेका थिए । नोकरीसँगै त्यहीँ नै कराते पनि सिक्न थालेंका थिए उनले । त्यसपछि विस्तारै दिनहरु फेरिँदै गयो ।’पहिले सोतोकान करातेमा आफ्नो क्षेत्रमा उनी उत्कृष्ट खेलाडी नै बनेको सुनाउँछन् । करातेमा ब्ल्याक बेल्ट भएपछि उनी दुई वर्ष तेक्वान्दो सिक्न गए । तेक्वान्दो सिकेको दुई वर्षपछि त प्रशिक्षक नै बनिहाले ।दुई छोरी र एक छोराका पिता गंगा तेक्वान्दोको अन्तर्राष्ट्रिय मास्टर नै हुन् ।
भारतमा तेक्वान्दो सेन्टर नै खोलेर उनी बालबच्चालाई तेक्वान्दो सिकाउँछन् । सन् १९९१ देखि नै आफूले भारतमा तेक्वान्दो सिकाउन थालेको गंगा बताउँछन् । २०१५, २०१७ मा दक्षिण कोरियामा तेक्वान्दो प्रतिस्पर्धामा गएर पदक जितेका उनले अहिलेसम्म छोराछोरी लेखाउने पढाउने, घर चलाउने सबै काम तेक्वान्दोबाट नै भइरहेको गर्वले सुनाउँछन् । तीन सय रुपैयाँ बोकेर ठेगानविहीन बनेर भागेका उनीसँग अहिले आफ्नै घर छ ।
नानीलाई साढे ३ वर्षदेखि नै सिकाउन थाले । कोरियामा चुनचुन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दा प्रतिस्पर्धामा उनले छोरीलाई पनि लिएर गएका थिए । उनको छोरा खेरोकी फाइटको खेलाडी हुन् । लेगामेन्टमा समस्या आएर तीन पटक अप्रेसन गरेको भएर छोरा अहिले आराममा छन् । आराममै रहे पनि बहिनीले सागमा प्रतिस्पर्धा गर्दा हौसला बढाउन उनी नेपालमा नै छन् । उनै नेपाली बाबुकी भारतीय छोरी र बाबुसँग अनलाइन टिभीले गरेको रमाइलो कुराकानी तल हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०३:२६
आमाको मृत्युपछि सिफारिस लिन गएका सेवाग्राहीलाई वडाध्यक्षको मुक्का (भिडियो हेर्नुस्)
मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी श्रीमती जाङमुले दिइन् बालिकालाई चेतावनी्, ‘एउटा मात्र प्रमाण ल्याउ मेरो श्रीमानलाई मै जेल लैजान्छु’
करोडौ फ्यानका भएका चर्चित अभिनेता सोनु सुदको अर्को तारिफ योग्य काम, यस्तो रोगबाट थलिएका नेपाली युवक मधुको उपचारमा सहयोग गरिदिएपछि पाए पुनजीबन
चट्याङ लागेर घाइते बनेका १२ वर्षिया नारायणलाई उपचारको क्रममा मृत्यु
धरहरामा राखियो ३३० किलोको गजुर, गजुरमा ९५ तोला तीन लाल सुन
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख १० गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज राति ११ बजेदेखि शुक्रबार बिहान सूर्योदयसम्म शुरु हुने भयो यस्तो उल्का वर्षा
हार्दिक बधाई १० लाख मानिसको अन्धोपन हटाउन सन्दुक रुइत र बेलायती अर्बपतिले गरे सहकार्य सम्झौता
अमेरिकी आर्मीमा काम गरेका मेकेन्द्रले भावुक हुँदै सुनाए यस्तो मार्मिक घटना ( भिडियो सहित )
हार्दिक बधाई : नेपालमै बनेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक बाइक चलाउँदै कुलमान घिसिङ सर
यी हुन् सात नक्कली डाक्टर, विभिन्न हस्पिटलमा काम गर्दै गर्दा यसरी पक्राउ परे
माओवादीका यी ३० नेता जादै छन् ओली तिर,यस्तो छ बालुवाटार पुगेको नाम लिस्ट !
भारतले अव’रुद्ध गरेको स्थानमा पहाड फो’डेर सडक बनाउदै नेपाली सेना, सम्मान स्वरुप सेयर गरौं !
एमाले पार्टीले निलम्बन गरे पछि यसरी रोए माधवकुमार नेपाल !
केपि ओलिको अगाडि मुख देखाउन जान्न : माधव नेपाल
अब ओलीसँग मिल्ने सम्भावना समाप्त भयो : वामदेव गौतम
केपी ओलीले राजीनामा दिए फेरि एकता हुन्छ, एकै दलको सरकार बन्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
२० वर्ष कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो २० महिनामै प्रचण्ड धुलोपिठो हुनुभो
नदीमा पानी कम भएको छ, बिजुली काटिने छ अचम्म मान्नु पर्दैन: शाक्य
योगेश र ईश्वर पोखरेलको जम्काभेट, एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन् (भिडियोसहित)
© 2018 - सर्वाधिकार सुरक्षित @ enewsnepali.com
Site by Soft Crunch